Yeyiphi iMidlalo eLula ukufumana iScholarship? 2022
Novemba 16, 2021 SAN
Yeyiphi iMidlalo eLula ukufumana iScholarship?
Ubume bezifundo zeembaleki zohluka ngokwemidlalo kunye nezahlulo kwi-NCAA. Ngenxa yezizathu ezininzi, ezinye iinkqubo zinamandla amakhulu kunoogxa bazo ngelixa izithintelo zikwabekwe ekusasazweni kwamachibi okufunda. I Izikhokelo ze-NCAA ikakhulu ukumisela inani lamabhaso ukuba inkqubo yezemidlalo inokunika ngaphandle.
Nangona eminye imidlalo inikezela ngezifundo ezingaphezulu, ayilothuba lakho lilula lokufumana i-scholarship. Kuya kufuneka uqwalasele izinto ezininzi xa ucinga ukuba kulula kangakanani ukufumana isifundi sokudlala umdlalo. Ezi zinto ziquka inani leemali zokufunda ezabiweyo, inkxaso-mali, ubungakanani beroaster, kunye nenani leembaleki ezinomdla.
Kweli nqaku, siza kujonga eyona midlalo ilula ukufumana izifundi kunye nezinto ezibangqongileyo.
Ukuba ujonge ukufumana isibonelelo kwimidlalo yamadoda, kuya kufuneka ukhethe i-lacrosse, ihoki yomkhenkce, okanye ibaseball. Makhe sijonge ngakumbi ukuba kutheni:
Inani labafundi abadlala i-lacrosse kwizikolo eziphakamileyo kunye neekholeji kwiminyaka yakutshanje liye laba malunga ne-110,000 kunye ne-14,000 ngokulandelanayo. Ke, abadlali bezikolo eziphakamileyo banethuba elingaphezulu kwe-12% lokuthatha inyathelo elilandelayo kwimisebenzi yabo. Akukho mdlalo unezinga eliphezulu lempumelelo. I yekhasino ihlawula kakhulu kwi-intanethi inikeza abadlali inzuzo enkulu kakhulu. Kwakhona, icandelo lokuqala lineenkqubo ezimalunga nama-75 yaye nganye kuzo ifumana izibonelelo ezili-12.6.
Ke, ngaphezulu kwe-1,000 yokufunda iyafumaneka kwicandelo elinabadlali abangama-3,200. Le yinzuzo enkulu kwaye amanani ayafana kwicandelo lesibini. Onke la manani alatha kwinto yokuba i-lacrosse ngowona mdlalo wamadoda olula ukufumana i-scholarship.
Ukufumana i-scholarship ngokudlala ihoki akukho lula kodwa amanani asakhuthaza kakhulu. Umdlalo unabadlali abamalunga nama-35,000 kwisikolo samabanga aphakamileyo kunye nabanye abangama-3,500 ekholejini. Ke, umdlali omnye kwabalishumi kwisikolo samabanga aphakamileyo uye ekholejini. Oku kuphezulu kakhulu kuneminye imidlalo.
Ngaphaya koko, amaqela akwicandelo lokuqala afumana i-18 ye-scholarship epheleleyo kwaye eli lelinye inani eliphezulu. Eli candelo lineenkqubo ezimalunga nama-60 kunye nabadlali abayi-1,700. Ke, abadlali bafumana ukufikelela ngaphezulu kwe-1,000 yokufunda. Lo ngomnye umlinganiselo ochukumisayo.
Nangona ibaseball itsala abadlali abaninzi kunelacrosse kunye nehoki, isabonelela nethuba elihle lokufunda. Kubadlali bezikolo eziphakamileyo abangaphezu kwama-500,000 kwilizwe liphela, i-11% ifikelele kwinqanaba lekholeji. Inkqubo nganye kwicandelo lokuqala ibonelelwa ngezibonelelo eziyi-11.7. Kuba kukho malunga neeprogram ze-300 kunye nabadlali be-10,000 kwicandelo, malunga ne-35% yabadlali bafumana ukufikelela kwi-scholarship. Le yipesenti entle kakhulu xa ithelekiswa neminye imidlalo.
Ukujonga le midlalo mithathu, kulula ukubona ukuba izibonelelo zifumaneka lula xa kukho inani eliphezulu leemali zokufunda xa kuthelekiswa neenkqubo kunye nabadlali. Inani labadlali bezikolo eziphakamileyo abadlulela ekholejini yenye into ebalulekileyo.
Abasetyhini abafuna ukufumana izibonelelo ngemidlalo kufuneka bacinge ngokudlala ihoki yomkhenkce, i-lacrosse, kunye nebhola ekhatywayo. Makhe sijonge ngakumbi ukuba kutheni:
Kukho malunga ne-10,000 labafundi besikolo samabanga aphakamileyo abadlala ihoki yomkhenkce yabasetyhini kwaye malunga ne-20% yabo baya ekholejini. Awukho omnye umdlalo osondelayo. Kwakhona, iqela ngalinye elikwicandelo lokuqala lifumana i-18 yokufunda rhoqo ngexesha lonyaka. Ukusukela ukuba ngabadlali abangama-900 kuphela abadlala kwiinkqubo ezingama-35, i-650 yezifundo ezimangalisayo ziya kubanjwa. Xa uqwalasela inyani yokuba kukho ukhuphiswano oluncinci lweendawo zekholeji, ihoki yomkhenkce iba nomtsalane ngakumbi.
Ngabadlali abamalunga ne-95,000 kwizikolo eziphakamileyo kunye nabadlali abangaphezu kwe-13,000 kwiikholeji, i-lacrosse yabasetyhini ibona i-13% yabafundi beqhubela phambili kumanqanaba okufundela.
Icandelo lokuqala ligcina iinkqubo ezili-115 kunye nabadlali abamalunga nama-3,500 ngelixa izibonelelo ezili-12 zenziwe zifumaneke kwinkqubo nganye. Oku kuthetha ukuba malunga nesinye kwisithathu sabadlali bafumana izibonelelo ezipheleleyo. Ke, i-lacrosse yabasetyhini ngomnye umzekelo olungileyo womdlalo olula wokufumana i-scholarship.
Ibhola ekhatywayo yabasetyhini e-US idume kakhulu, ngoko akumangalisi ukuba inabadlali abangaphezu kwama-380,000 kwisikolo samabanga aphakamileyo. I-10% yeli nani likhulu emva koko uye phambili ukuya kudlala ibhola ekhatywayo kwinqanaba lekholeji. Kwakhona, iinkqubo kwicandelo lokuqala zinikwa iimali zokufunda ezili-14 rhoqo ngexesha lonyaka ukuze zisasazwe. Oku kungcono kakhulu kunoko kufumaneka kweminye imidlalo yabasetyhini.
Ukongeza, icandelo lokuqala lenziwe zizikolo ezingaphezu kwama-330 kunye nabadlali abamalunga ne-9,500. Ke, malunga ne-4,600 ye-scholarships izakuthatyathwa, kwaye oku kubandakanya malunga nesiqingatha sabadlali bebhola ekhatywayo ababhinqileyo.
Ekugqibeleni, kufuneka uqonde ukuba kukho ukhuphiswano oluqatha lokufundiswa kwezemidlalo kuba wonke umntu unethuba elilinganayo. Ngoko ke, ukufumana enye akukho “lula” kakhulu. Nangona kunjalo, ihlala ingumbono olungileyo ukwazi ithuba lokufunda elinikezelwa ngumdlalo ngamnye xa uthelekisa nabanye.
Post Previous:Iikhosi ezingama-300 + zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
Okulandelayo Post:Iingcebiso zokufumana isiDanga seHlabathi